निमुखा जनता हस्पिटल चहार्दै सडकमै मृत्यु बरण ! - समृद्ध नेपाल
निमुखा जनता हस्पिटल चहार्दै सडकमै मृत्यु बरण गर्न बाद्य छन्। धनुषाका लोक ब परियार त प्रतिनिधि घट्ना मात्रै हो। तर सरकारलाई निमुखा लोकबहादुरहरुको बारेमा केको सरोकार? सरकार त विस्वासको मतको खेतीपातीमा लागेको छ। लोकबहादुर सांसद भएको भए सायद उनी बिरामी नभए पनि आइसियुमा हुने थिए!
काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञा एक साता थप भएको छ । र यो अवधिमा निषेधाज्ञा थप कडा हुनेछ उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले २९गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । साथै पसल खोल्ने समय बिहान ७देखि ९बजेसम्म मात्र कायम गरिएको छ । अत्यावश्यक कामबाहेक घर बाहिर निस्कन पनि रोक
लगाउने निर्णय भएको ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसअघि जारी भएका सबै पास खारेज गर्ने निर्णय समेत भएको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो २५प्रतिशत कार्यालय खोल्न पाउने र त्यहाँ २० प्रतिशत कर्मचारीले मात्रै काम चलाउनुपर्ने निर्णय भएको कवाडी संकलन लगायत ठेला गाडा समेत सञ्चालनमा रोक लगाइएको उनले बताए ।
इजिप्टमा दुई रेल ठोक्किँदा ३० जनाको मृत्यु !
चितवन घटना तिहारमा रबि दाईलाई सम्झिदै यसरी भक्कानिइन बुहारी अस्मिता… (भिडियो)
सबैले एक चोटी महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका प्रेरक भनाईहरुबाट जीवन अनुभूत गराैँ !
आखिर यी छोरा ले के गरे ? आमाले भनिन !
अभिनेत्री तथा मोडल रक्षा श्रेष्ठ आमा बन्दै !
जंगिदै भने जस्तो आदेश आए पनि जनताको ठगिएको पैसा असुल्नु छोडदिन : प्रेम संजेल भिडियो सहित
भोली बिहिबार सार्वजनिक विदा नभएको गृह मन्त्रालय को पुस्टि !